Others – NOe
ဒီမနက် ၄ နာရီခွဲ ကထွင်းပုဂံကပြန်ရောက်လို့ ကျောင်းမှာသွားကြိုရသေးတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ၆ နာရီထိုးနေပြီ။ ခဏဆိုပြီးပြန်အိပ်လိုက်တာ ၉ နာရီမှနိုးတယ်။
ကမန်းကတမ်းထပြီး ရေမိုးချိုးပြီး အဖွားကို လေဆိပ်လိုက်ပို့ရတယ်။
အဲဒါကို ရွှေပိုးက တစ်ယောက်တည်းစိတ်မချဘူးဆိုပြီး စိတ်ပူနေတယ်။
အဖွား Boarding Gate ဖြတ်ပြီးဝင်သွားကြည့်ပြီး လှည့်ပြန်နှုတ်ဆက်မလားလို့ မျှော်လင့်ကြသေးတယ်။
အဖွားက ဂရုတောင်မစိုက်ဘူး။ ဝင်သွားပြီးကတည်းက လှည့်ကိုမကြည့်တာ … ၂ယောက်သား ဒီအတိုင်းလှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ်။
၁ နာရီကျော်တော့ အဖွားရခိုင်ကိုကျန်းမာစွာရောက်ရှိကြောင်းဖုန်းလက်ခံရရှိတယ်.
တစ်နေ့နေ့မှာ အခုလိုပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကို ကျောခိုင်းသွားပြီး ထာဝရပြန်လှည့်ကြည့်မခံရမယ့် အခြေအနေတွေကြုံလာရဦးမှာပဲ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ကျောခိုင်းသွားပြီး ထာဝရပြန်လှည့်မကြည့်နိုင်တော့မယ့်သူက ကိုယ်လည်းဖြစ်ဦးမှာပဲလေ။
Posted in Others, PeopleLeaveacomment
တက်တူးထိုးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ နိုးထဖြစ်တဲ့ ဒီနေ့
တစ်ကိုယ်လုံးတက်တူးအပြည့်ထိုးထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အကြောင်း ၃ တန်းတုန်းက SUMMER SCHOOL မှာ သင်ခဲ့ရဖူးတယ်။
၉ တန်းလောက်ရောက်တော့ တက်တူးထိုးချင်တဲ့ အာသီသစဖြစ်တယ်။
အခြားများများစားစားရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ “NOe” ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးကို လက်တစ်ဖက်ဖက်ရဲ့ တစ်နေရာရာမှာထိုးချင်တာ။
ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကလည်း ဘယ်တော့မှမထိုးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။
ကထွင်းကလည်း တက်တူးကြိုက်ပုံ မပေါ်ဘူး။”အရမ်းထိုးချင်သပဆိုရင် ပေါင်မှာထိုးကွင်းတွေထိုးပါလား” လို့တော့ ခဏခဏပြောတယ်။
အမြဲပေါင်းဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းမတွေမှာ တက်တူးတွေရှိကြတယ်။ဟိုတစ်လောက မြတ်နှင်းက တက်တူးအသစ်သွားထိုးတော့ ခေါ်သေးတယ်။မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။အဲဒီထိ ထိုးချင်စိတ်မဖြစ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မနက် အိပ်ယာကနိုးနိုးချင်း ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်က “ငါ့ကိုယ်မှာ တက်တူးတစ်ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်”ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီး။
နောက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့ မနက်ဖက်တွေတရားပြန်ထိုင်ဖြစ်ဖို့များတယ်။
သက်သတ်လွတ်စား ၊ အဖြူဝတ် ၊ တရားထိုင် ၊ တက်တူးတွေနဲ့…
အဲဒီတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး မထိုးဖြစ်အောင် နေဦးမယ်။
Facebook မသုံးဖြစ်တာ ၁ လလောက်ရှိတော့မယ်။
ညနေခင်းတွေဆို ကန်တော်ကြီးကို ပုံမှန်လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။
နေဝင်ချိန်ကို သေသေချာချာ ခံစားတယ်။
ကားကြပ်တဲ့အချိန်တွေဆိုလည်း ဘေးဘီ ဝဲယာသေချာကြည့်ဖြစ်တယ်။
လမ်းသွား လမ်းလာတွေ ၊ ကားစောင့်သူတွေ ၊ စျေးသည်တွေ ၊ ကလေးတွေ ၊ ငှက်တွေ ၊ လမ်းဘေးခွေးတွေ ၊ ဘတ်စ်ကားတွေ …
အကုန်လုံးကို သေချာအချိန်ပေး အလေးထား ဂရုတစိုက်ကြည့်ဖြစ်နေတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာအရင်ကထက်ပိုလှလာတယ်။
ရုံးချိန်မှာလည်း အလုပ်ကို အာရုံစိုက်ရတာပိုကောင်းလာတယ်။
ဒါပေမယ့် … ဂိမ်းလည်း ထင်သလောက်တော့မဆော့ဖြစ်ပြန်ဘူး။
Screen Time ကို လျော့သထက်လျော့အောင် လုပ်ချင်နေတယ်။
သက်သတ်လွတ်စားတာကလည်း ၄ လပြည့်တော့မယ်။
ဒီကြားထဲမှာ ကိုထွန်းလင်းနဲ့ဒံပေါက်သွားစားတဲ့နေ့က ကြက်သားနည်းနည်းစားဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
ဒံပေါက်ထဲက အသားက ပုံမှန်တွေထက် ပိုနူးညံ့တယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ အရမ်းမာနေလို့ မနည်းဝါးလိုက်ရတယ်။
ဝါးပြီးတော့ လည်း မျိုချဖို့ ကိုတော်တော် ကြိုးစားလိုက်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်နေ့ ဝမ်းချုပ်ပြီး အိမ်သာမတက်နိုင်လို့တော်တော်တော့ ဒုက္ခရောက်သွားသေးတယ်။
SUNDEW နဲ့ပတ်သတ်ပြီးပြောရရင် ဒီလထဲ ရုံးခန်းအသစ်ကိုပြောင်းမယ်။
ဟိုဖက်ရုံးခန်က ဒီဖက်ရုံးခန်းထက်အများကြီးလှတယ်။ဒီရုံးခန်းလေးကိုတော့ သံယောဇဉ်ရှိနေတယ်။
ဒါပေမယ့် အရမ်းငြီးငွေ့လာတာတော့ ပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
SUNDEW ၁၀ နှစ်မပြည့်ခင်မှာ Campus သေးသေးလေးတစ်ခုလောက်တော့ လိုချင်သားရယ်။
မနေ့က ခုံတွေဆေးသုတ်ရင်တော့ “အော် … ဒီခုံတွေတောင် ပိုင်ရှင်တွေ အများကြီး ပြောင်းပြီးပါရောလား” လို့ ဆိုပြီး SUNDEW ရဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တစ်လျှောက်ကို သတိရသွားသေးတယ်။
အေးလေ…… ၉ နှစ်တောင်ပြည့်တော့မှာပဲကို…..။
နောက်ပြီး ကိုယ်သူငယ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းထိ စာလုပ်ခဲ့တဲ့ ခုံလေးရယ် ၊ နှစ်တန်းကနေ ဆယ်တန်းအထိသုံးလာတဲ့ စာအုပ်စင်လေးရယ်ကို တွေ့ပြီး “ငါတော်တော်အသက်ကြီးလာပါလား”လို့တောင် တွေးမိသေးတယ်။
ပြောနေကျအတိုင်းပြောရရင်တော့ “လက်ရှိအခြေအနေကို ကျေနပ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မရောင့်ရဲနိုင်ဘူး”။
၁၂ လပိုင်းမှာ မင်္ဂလာဆောင် ဖို့ရှိတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် ကိုထွန်းလင်းကို ပင်ပင်ပန်းပန်းဘာမှမလုပ်စေချင်ဘူး။
သူဝါသနာပါတဲ့ ပန်းချီလေးဆွဲပြီး အေးအေးဆေးဆေးလေးပေးနေချင်တယ်။
အခုအချိန်မှာ သူ့ကိုသွားပြောရင်တော့ “ခင်ဗျားကပြောနေတာပဲ။ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။” ဆိုပြီးပြန်ပြောလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ အလုပ်နဲ့ပဲ သက်သေပြတော့မယ်။
၂၀၂၀ ထဲမှာတော့ လုံးချင်းအိမ်လေးတစ်လုံး ဆောက်နိုင်ချင်တယ်။
Anyway…. Dreams Do Come True.
Posted in Others, People, SUNDEWLeaveacomment
ဆုံဖူးသည် ဆိုသည်ထက် သူက ကျွနု်ပ်ကို လာဆုံသည်ဆိုပိုမှန်မည်။
ထိုစဉ်က ကျွနု်ပ်သည် တောင်တန်းတွေဖက် ခရီးသွားရန်ပြင်ဆင်နေခဲ့သည်။
ပုတ်သင်ညိုက ကျွနု်ပ် နှင့်လိုက်ချင်သည်ဆို၍ အိတ်ကပ်ထဲထည့်ခေါ်သွားခဲ့ဖူးသည်။
ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာ ပုတ်သင်ညိုက သူ့မိသားစုအကြောင်းတွေပြောပြသည်။
ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှ၍ဆွေမျိုးတွေမျက်နှာကြည့်နေရသည့်အဖြစ်အပျက်များပါသလို ချမ်းသာလွန်း၍ အရပ်ထဲတွင် ဘယ်သူကမှမနာလိုကြသည့်အကြောင်းများလည်းပါသည်။
ကျွနု်ပ်မှာလည်း ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ၍ နှုတ်ဆိတ်၍သာနားထောင်ပေးခဲ့ရသည်။
တစ်ချက်တစ်ချက် ပုတ်သင်ညိုက မိကျောင်းမျက်ရည်တွေကျသည်။
ခရီးကပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်း ပုတ်သင်ညိုက ကျွနု်ပ် နေရာတွင် နေခွင့်ပေးရန်တောင်းလာ၍ တစ်နေရာစာပေးနေခဲ့မိသည်။
ကျွနု်ပ်နေရာတွင် အနေကြာပြီး ကျွနု်ပ်၏ အစာတော်တော်များများစားပြီးနောက် ပုတ်သင်ညိုက ကျွနု်ပ်တွင် ရွှေဆွဲကြိုးများမှ တစ်ကြိုးကို သူ့လည်ပင်းတွင် ဆွဲလိုကြောင်း ငိုယိုပြလာသည်။
“ခင်မြတ်နိုး” ဆိုတဲ့ နာမည်မှာ “မြတ်”ဆိုတဲ့ စာလုံးကို English လိုပေါင်းရင် ဘာလို့ “myat” လို့မပေါင်းဘဲ “Mrat” လို့ပေါင်းရတာလဲတဲ့။
တစ်ချို့ကလည်း ပေါင်းထားတဲ့ စာလုံးအတိုင်း “ခင်မရတ်နိုး”လို့လိုက်ခေါ်ကြလို့လည်း ကျောချမ်းမိရသေးတယ်။
( “ရခိုင်အသံထွက်အတိုင်းရအောင်ရေးတာမလား” လို့ထင်ကြေးပေးတဲ့သူတွေကရှိသေးတယ်။)
တကယ်တော့ ဒီလိုဗျ ။ ကျုပ်နာမည်ကို English လိုပေါင်းလိုက်ရင် စာလုံးတွေ အားလုံးကို မျဉ်းအပေါ်မှာပဲရှိစေချင်လို့ပါ။ တကယ်လို့ ပုံမှန်အတိုင်း”မြတ်”ကို “Myat” နဲ့သာပေါင်းမယ်ဆိုရင် “y” တစ်လုံးတည်းကွက်ပြီး မျဉ်းအောက်ရောက်နေတာကို မကြိုက်လို့ “y” အစား “r” သုံးပြီး ရေးတာပါ။
ဒီလိုစရေးခဲ့တာ ကျုပ် ၈တန်း ကျောင်းသားဘဝကတည်းကပဲ။ ဂျိုစကြွတဲ့ ၁၃ နှစ်သားအရွယ်ကိုဗျ။
(“အတန်းထဲမှာရော တစ်ကျောင်းလုံးမှာပါ နာမည်ကို ဒီလို စာလုံးပေါင်းတာ ငါတစ်ကောင်ပဲရှိတယ်ကွ” ဆိုပြီးလည်း လူမသိ သူမသိ ကြိတ်ပြီး ဂုဏ်ယူခဲ့ဖူးသေးတယ်။)
” ရူးပါ့ ” လို့ပဲ ဆိုချင်ဆို ဗျာ ။ကျုပ် အတွေးနဲ့ကျုပ်တော့ ဟုတ်နေတာပဲလေ။
Posted in Others6 Comments
(သူ့ခေတ်သူ့အခါမှာ) ” မတ်ကြီးလျာ ” ဆိုတော့
ကဗျာကို သေသေချာချာနားလည်အောင် ဖတ်မိတော့မှ
ရဲမျိုးသမီး၊ မောင်ကြီးနှမ၊ ညက်လှပြာစင်။”လေးဖြစ်နေပြန်တာကိုး။
“မြိတ်လွတ်စုလည်း၊ အငယ်တည်းက၊ ကျွမ်းဝင်ကြသည်” လို့လည်းဆိုထားပြန်တော့
“မယ့်သည်ပင်” က “ခရီးသား”ဖြစ်နေပေမယ့်
မိန်းမပျိုလေးကတော့ ” ချစ်ခြင်းစုရုံး၊ သက်ထက်ဆုံးသည်၊ ၊ နှလုံးမခြားစောင့်တရား”ဆိုတဲ့ အတိုင်း
“ချစ်ရသူကလွဲ ၊ ဖွဲ ဆန် ကွဲ” လို့ မှတ်ယူထားသူလေ။
ကဗျာထဲက မိန်းမပျိုလေးဟာ တကယ်ကို
ဒီကဗျာလေးသင်တုန်းက ဆရာ ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားလေးက
ဘဝအတွက် အရေးပါတဲ့ အသိတရားလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
“မိန်းကလေးတွေ ကျိုင်းစင်မြဝါ မတ်ကြီးလျာကိုမှလက်တွဲချင်တယ်ဆို
ကိုယ်တိုင်ကလည်း စံကားပွင့်နှင့်နှိုင်းတင့်နိုးရလောက်တဲ့ ရဲမျိုးသမီး ၊ ညက်လှပြာစင်လေးဖြစ်နေမှ။
ယောကျာ်းလေးတွေလည်း ရဲမျိုးသမီး ၊ ညက်လှပြာစင်လေး ကိုလိုချင်တယ်ဆို
ကျိုင်းစင်မြဝါ မတ်ကြီးလျာ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ “တဲ့။
ဒီကဗျာလေးရဲ့ အဓိက Themes လေးက ဒါပါပဲ။
ကဗျာရှင် စာဆို ခမျာမှာတော့
သားကောင်းရတနာတွေလည်း “ကျိုင်းစင်မြဝါ မတ်ကြီးလျာ”တွေဖြစ်ကြပါစေ။
သမီးကောင်းရတနာတွေလည်း “စံကားပွင့်နှင့် နှိုင်းတင့်နိုး”နိုင်ကြပါစေ။
တောင်ရွှေပုပ္ပားမှာလည်း ” ရွှေနဲ့ယိုးမှားပန်းစံကား “တွ “နံရှားကြိုင်လွင့် ၊ ခါတန်ပွင့်” ပါစေ။
.mm Domain လေးသွားလျှောက်ခြင်း
Posted on August 3, 2016 August 13, 2016 by admin
မြန်မာနိုင်ငံမှာလေ com.mm domain လေးဝယ်တာလေ
Company Register မိတ္တူပေးရတယ်။
USD 60 ကို In Cash ပေးရတယ်။
Domain Activate ဖြစ်ဖို့ ၁၀ ရက်စောင့်ရတယ်။
ပြီးလည်းပြီးရော ရလာတဲ့ Domain က Name Server Change မရဘူးတဲ့။
ဒီ Project ကို လက်ခံမိတာကိုက သားမှားတာပါ။
Customer ကို တောင်းပန်ကြောင်း စာ ပို့ပြီး
စီးပွားရေးအရ ရှုံးပေမယ့် အတွေ့အကြုံရတာ အမြတ်ပါ။
Posted in Gossip, OthersTagged Gosspi, OthersLeaveacomment
***တစ်ချို့တွေက သူတို့ ဖတ်ဖုူးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေအကြောင်း ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့အချိန်မှာ
ကျုပ်ကတော့ ကျုုပ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာလုံးလေးတွေတစ်လုံးစီတိုင်းအတွက် ကျေနပ်မိလို့မဆုံးဘူး။***
ကျုပ်က စာရေးဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် စာရေးရတာတော့ ဝါသနာပါတယ်။
ကျုပ် စာစရေးတုန်းက ၃ တန်းပဲ ရှိဦးမယ်။
ခဲတံလေးနဲ့ စာ ၅ ကြောင်းလောက်ရေးရာကနေ ရောဂါစတော့တာပဲ။
စာစီစာကုံးစာအုပ်ကြီးတွေရှေ့ချပြီး ၏ / သည် မလွဲ ကူးရေးရမှာအရမ်းပျင်းတော့
စိတ်ထဲရှိတာတွေလျှောက်ရေးမိလို့ ကျောင်းက ဆရာမရဲ့ အမှတ်လျှော့တာတွေလည်းခံခဲ့ရဖူးတယ်။
၇ တန်းလောက်မှာ သီးသန့် ဗလာစာအုပ်လေးတွေလုပ်ပြီး
ကဗျာမဟုတ်၊ စာမဟုတ် တဲ့ ရေးချင်တာလေးတွေ ချရေးလို့
ကျောင်းက ဘော်ဒါတွေကို ပေးဖတ်ဖူးတယ်။
၁၀ တန်းမှာ အရမ်းတော်ပြီး တကယ်တတ်တဲ့ မြန်မာစာ ဆရာ နဲ့ တွေ့ရတာက
ကျုပ်အတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံပဲ။
တစ်ပတ် ၂ ပုဒ် တင်ရတဲ့ စာစီစာကုံးတွေမှာ ၈ မှတ် က ဆရာ့ရဲ့ အမြင့်ဆုံး စကေးဆိုပေမယ့်
ကျုပ်ကတော့ စိတ်ထဲတွေ့တာ ရေးရင်း ၁၃ မှတ်ထိ ရခဲ့ဖူးတယ်။
(အဲဒီ စာစီစာကုံးစာအုပ်တွေကတော့ တပည့်ကျော်တစ်ယောက်ကောင်းမှုနဲ့ အမျှဝေလိုက်ရတာတော့ နှမြောမဆုံး)
၁၀ တန်းပြီးလို့ တစ်နှစ်လောက်အကြာမှာ
တာမွေ ၅ က သုညတို့ အုပ်စုနဲ့ ပေါင်းပြီး ကဗျာစာအုပ်ထုတ်တာ
Security ရုံးခန်းရောက်တဲ့အကြောင်းတော့ နောက်ကြံုမှရေးမယ်ဗျာ။)
အလွယ်ဆုံးကတော့ Facebook Status တွေပေါ့။
ကျုပ်ရဲ့ Official Website လေးပြီးသွားရင်တော့ အဲဒီ Website မှာပဲရေးတော့မယ်လို့တွေးထားတယ်။
စာရေးတာက ကျုပ်ရဲ့ အသက်မွေးမှုမဟုတ်ဘူး။
စာရေးပြီးထမင်းစားနေတာလည်းမဟုတ်လို့ ကျုပ်ရေးတဲ့ စာတွေက
ဘာစာပေ ၊ ညာ စာပေ ၊ ဘာအရေးသား ၊ ညာ အရေးသားတွေ ခေါင်းစဉ်တပ်မရဘူး။
(စာလုံးပေါင်းနဲ့ သဒ္ဒါတော့မှန်အောင် သတိထားတယ်။)
“ဒါဆို ဘာလို့စာရေးလဲ?”လို့မေးလာရင်တော့ ကျုပ်မှာအဖြေမရှိဘူး။
စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ စကားလုံးတွေက မသုံးမဝင်ဘူးလေ။
ဝါသနာအရဆိုတာထက် စာရေးဖို့အတွက် အထောက်အပံ့အနေနဲ့ဖတ်တာ။
ဒါပေမယ့် ဦးနှောက်သန်မာစေမယ့် သုတ စာပေတွေထက်
နှလုံးသား ကျန်းမာရေးအတွက် အနုပညာမြောက်တဲ့ ရသစာပေတွေ ဖတ်တာပိုများတယ်။
နောက်ပြီး ကျုပ် တက်ကျမ်းတွေကို မုန်းတယ်။ အတွေးအခေါ်စာအုပ်တွေဆို ပိုတောင်မုန်းသေး။
ဒါကြောင့် ကျုပ်ရေးတဲ့ စာတွေမှာလည်း
တစ်ချို့တွေက သူတို့ ဖတ်ဖုူးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ကြီးတွေအကြောင်း ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့အချိန်မှာ
ကျုပ်ကတော့ ကျုုပ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ စာလုံးလေးတွေတစ်လုံးစီတိုင်းအတွက် ကျေနပ်မိလို့မဆုံးဘူး။
Posted in Others, PeopleTagged Others, PeopleLeaveacomment